၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ Archives > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌
ဒေါ်ညွန့်ရီ(ခ)မိစန္ဒာနန် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃)
October 12, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မိဟံသာ မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲရှင်? ဖြေ-မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ တောင်းဆိုချက်ရော မိမိအနေနဲ့လည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်တယ်လို့ ယူဆလို့ပါ။
MNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မင်းဇေယျာဦး(ခ)ကျော်ဇေယျာဦး (မော်လမြိုင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
October 8, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
ရေးသားသူ- လယီဂွန်း မေး။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။ ဖြေ။ ။ မွန်လူမျိုးနှင့်မွန်ပြည်နယ်အကျိုးအတွက် We are developed.
တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော် (ကျိုက်မရောမြို့နယ်- မဲဆန္ဒနယ် ၂ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
September 28, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မေးမြန်းသူ- လယီဂွန်း မေး- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်အံက်သာ (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
September 4, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မင်းသုတ – မေးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? ဖြေ- အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရလျှင် ၂၀၁၀ တချို့ကိုယ်စားလှယ်များကို အားမရလို့ပါ ကျွန်တော်တို့မွန်
August 27, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မေးမြန်းသူ-ချစ်မင်းထွန်း မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?